"Miezaha mitady fihavanana amin'ny olona rehetra ary fahamasinana; fa izay tsy manam-pahamasinana dia tsy hahita ny Tompo" - Heb. 12:14.
Efa hatrizay hatrizay Andriamanitra no nifidy ny olona mba ho masina. "Fa izao no sitrapon'Andriamanitra, dia ny hanamasinana anareo" - 1 Tes. 4:3. Tonga amintsika ny akon'ny feony manao hoe: "Miezaha ho masina kokoa, masina kokoa hatrany." Ary toy izao no valinteny tokony homentsika: "Eny Tompo ô, ho masina kokoa hatrany".
Tsy misy olona mandray ny fahamasinana hatrany am-bohoka, na mandray izany ho fanomezana avy amin'olombelona hafa. Ny fahamasinana no fanomezana avy amin'Andriamanitra amin'ny alalan'i Kristy. Tonga zanak'Andriamanitra ireo izay mandray ny Mpamonjy. Zanany ara-panahy izy ireny, nateraka indray, nohavaozina tao anatin'ny fahamarinana sy ny tena fahamasinana. Novaina ny sain'izy ireny. Mibanjina ny mandrakizay amin'ny alalan'ny fomba fijery misokatra kokoa izy. Ampidirina ho anisan'ny fianakavian'Andriamanitra izy ary lasa tahaka Azy, novain'ny Fanahiny avy amin'ny voninahitra ho amin'ny voninahitra. Niala avy amin'ny fitiavana fatratra ny tenany izy, ary lasa tia fatratra an'Andriamanitra sy i Kristy.
"Koa amin'izany, satria efa nohamarinina tamin'ny finoana isika, dia aoka isika hanana fihavanana amin'Andriamanitra amin'ny alalan’i Jesôsy Kristy Tompontsika" - Rom. 5:1. Ny fanamarinana dia midika ho famelan-keloka. Midika izany fa voaomana handray ny fitahian'ny fanamasinana ny fo ary afaka tamin'ny asa nandamoka rehetra. Nambaran'Andriamanitra tamintsika ny zavatra tsy maintsy hataontsika mba handraisana izany fitahiana izany. "Miasà amin'ny tahotra sy ny hovitra hahatanteraka ny famonjena anareo. Fa Andriamanitra no miasa ao anatinareo na ny fikasana na ny fanaovana hahatanteraka ny sitrapony. Ataovy ny zavatra rehetra amin'ny tsi-fimonomononana sy ny tsi-fisalasalana, mba ho tsy manan-tsiny sady tsy misy fitaka hianareo, dia zanak'Andriamanitra tsy manana adidy eo amin'ny firenena meloka sy maditra, izay isehoanareo tahaka ny fanazavana eo amin'izao tontolo izao" - Fil. 2:12-15.
Ny fitiavan'Andriamanitra dia mahavita manandratra sy mahamendrika ny olombelona, mihoatra noho izay vitan'ny hafa rehetra, raha toa ka tehirizina ao am-po sy aseho amin'ny alalan'ny teny sy ny fihetsika. Tao amin'ny fiainan'i Kristy no nisehoan'izany fitiavana izany tamin'ny fahafenoany. Teo an-kazo fijalian'i Kristy no nanaovan'ny Mpamonjy ny fanavotana ny taranak'olombelona lavo. Ny fahamasinana no vokatr'izany sorona izany. Nampanantenaina izany fanomezana lehibe izany isika satria maty ho antsika Izy. Ary maniry fatratra handrotsaka io fanomezana io ho antsika i Kristy. Tiany ho mpiray amin'ny fombany isika. Maniry fatratra ny hamonjy ireo izay nosarahin'ny fahotana tamin'Andriamanitra Izy. Miantso azy ireo hifidy ny hanao ny asa fanompoana ampanaoviny Izy, sy ny hanoloran'izy ireo tanteraka ny tenany ho eo ambany fifehezany, ary ny hianarany amin'Andriamanitra ny fomba fanaovana ny sitrapony — ST, 17 Des. 1902.